रंगीन खबर – Page 8 – SamajKhabar.com
राजेश हमाल एमाले छिर्ने, राष्ट्रिय सभा सांसद बन्ने तयारी
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमाल राजनीतिमा विशेष रुची राख्दछन् । आफ्ना विशेष अन्तर्वार्ताहरुमा राजेशले उपयुक्त समयमा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बताएका पनि छन् । हालै उनी राजनीति गर्नका लागि नेकपा एमाले प्रवेश गर्न लागेको चर्चा चुलिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौंको....पुरा पढ्नुहोस
शानको निर्देशनमा अंगालोमा बाँधिए निराजन र अशिष्मा
गायक सुरज मानन्धर आफ्नो पछिल्लो गीत 'तिम्रो अंगालोमा' लिएर दर्शक श्रोतामाझ आएका छन् । पछिल्लो समय बाहिर आइरहेका गीत संगीतमा केहि फरक स्वाद मानन्धरले यो गीतमा पोखेका छन् । गायनमा सुरजलाई अन्जु पन्तले साथ दिएकी छिन् । युट्युवमा सार्वजनिक गीतमा गोविन्द दाहालको शब्द समावेश छ भने संगीत चन्दन के श्रेष्ठको....पुरा पढ्नुहोस
प्रियंका चोपडाले आफ्नो तेस्रो हलिउड फिल्म ‘इजन्ट इट रोमान्टिक’ को सुटिङ सुरु गरेकी छिन् । उनलाई मंगलबार न्यूयोर्क सिटिमा फिल्मको सुटिङ गरिरहेको देखिएको छ । इन्टाग्राममा सार्वजनिक गरिएका तस्बिरमा प्रियंकालाई नायक एडम डिभाइनसँगै देखिएको छ । तस्बिर हेर्दा उनी कुनै समस्यामा फसेको जस्तो देख्न....पुरा पढ्नुहोस
साम्राज्ञीको ‘रेड हट’ अवतारले अष्ट्रेलिया ततायो
काठमाडौं । अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह यतिबेला अष्ट्रेलियामा छिन् । स्वदेशमा राम्रै चलेको उनको पछिल्लो चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ प्रिमियरका लागि उनी अष्ट्रेलिया पुगेकी हुन् । यतिबेला, चलचित्रभन्दा पनि अभिनेत्री साम्राज्ञीले रेड कार्पेट प्रिमियमा लगाएको पहिरनको राम्रै चर्चा भइरहेको छ ।....पुरा पढ्नुहोस
पटकथा लेखनबारे प्रशिक्षण दिन बलिउड फिल्म लेखक अन्जुम काठमाण्डौ आउँदै
बलिउड चलचित्रका चर्चित लेखक अन्जुम राजाबली काठमाण्डौ आउने भएका छन् । दुई दिने पटकथा लेखन सम्बन्धि प्रशिक्षणका लागि उनि काठमाडौं आउने भएका छन् । राजाबली कान्तिपुर फिल्म एकेडेमीको निमन्त्रणामा नेपाल आउन लागेका हुन् । राजाबलीले प्रदर्शनीमार्गस्थित पर्यटन बोर्डको हलमा दुई दिन पटकथा लेखनका विविध....पुरा पढ्नुहोस
ज्याकलिनले यो के गरिन्…
नयाँ दिल्ली – चर्चाका लागि अजिव अजिवका हर्कत गर्ने बलिउड अभिनेत्री मध्य ज्याकलीन फर्नाडिज पनि एक हुन् । उनले हालै एक तस्बिर इस्टाग्राम एकाउन्टमा पोष्ट गरेकी छन् । जुन तस्बिर अहिले चर्चाको बिषय बनेको छ । सार्वजनिक तस्बिरमा उनी पोलमा योगको मुन्द्रमा देखिएकी छन् । तस्बिरका साथमा उनले योगिनीका तमासा....पुरा पढ्नुहोस
ऋचा शर्माको अनुहार कसले बिगारदियो ?
काठमाडौँ । ‘आधा लभ’मार्फत फिल्म निर्माणमा पनि हात हालेकी नायिका ऋचा शर्मा निर्मित तथा अभिनित फिल्म ‘सुनकेसरी’को नयाँ पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । फिल्मको सार्वजनिक पोष्टर निकै डरलाग्दो बनाइएको छ । अझ, नायिका ऋचाको रुपले त अझ सबैलाई चकित बनाउँछ । यसअघि निर्माण पक्षले एक बालिका फिचरिङ फिल्मको फस्ट लुक....पुरा पढ्नुहोस
लक्ष्मीको छातिको ट्याटु सधै चर्चामा ?
काठमाडौ । गायिका लक्ष्मी आचार्यले आफ्नो पछिल्लो गीत ‘मस्त जवानी’को भिडियो दर्शकमाझ सार्वजनिक पछी निकै चर्चामा छिन् । आम दर्शक पाठकले गीतलाई मन पराएर प्रतिक्रिया दिई रहेका छन् । बिगतका दिनमा लोकगीत गाउँदै आएकी चर्चित लक्ष्मीको 'मस्त जवानी'ले चलचित्रमा राखिने आइटम गीतको झैँ छनक दिन्छ । भिडियोमा....पुरा पढ्नुहोस